Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247633 times)
« Reply #560 on: September 02, 2011, 10:00:05 AM »
" ပြည် သူ့အ ချစ် တော် "
အမေရိကန် သမ္မတ ကလင်တန် နှင့် ပြင်သစ် သမ္မတ ဂျက်ရှီရက် တို့ 
လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာကြသည် ။ ရှီးရက် က ပြောသည် ။
" တကယ်လို့လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး
သေသွားကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်ပြည်သူတွေက ပိုပြီး ၀မ်းနည်း ပူ
ဆွေးခြင်း ဖြစ်မယ်လို့ထင်သလဲ "
" ရုရှား ပြည်သူတွေပေ့ါ "
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
" သမ္မတ ယဲလ်စင် ကျနော်တို့ နဲ့အတူမပါလို့"
( ၁၉၉၉-ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် လူထုသဘောထားကောက်ခံချက်အရ ရုရှား
ပြည်သူ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာ သမ္မတ ယဲလ်စင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်
ခံခဲ့သည် ။ )
« Reply #561 on: September 02, 2011, 12:17:14 PM »
" ထူး ခြား ချက် ကိုယ် စီ "
လူသူမရောက်သော ကျွန်းတစ်ကျွန်းစီပေါ်တွင် ဂျာမန် ၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျူး နှင့် ရုရှားတို့ ကို
အမျိုးသား နှစ်ဦး ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးစီကို ချပေးလိုက်သည် ။ လအနည်းငယ် အကြာတွင် စစ်
ဆေးရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိလာသည် ။ ပထမဦးဆုံး ဂျာမန်တို့ နေရာ ကျွန်းကို စစ်ဆေးသည် ။ အ
မျိုးသား နှစ်ဦးကိုပဲ တွေ့ သည် ။
" အမျိုးသမီး ဘယ်ရောက်သွားသလဲ "
" စည်းကမ်းဆိုတာ နားမလည်တာနဲ့ ပဲ ကျနော်တို့ရေနှစ် သတ်ပစ်လိုက်တယ်.. "
ပြင်သစ်တို့ ၏ ကျွန်းပေါ် ရောက်လာကြသည် ။ ပြင်သစ်မ တစ်ယောက်ကိုသာ တွေ့ ရသည် ။
" ယောင်္ကျားနှစ်ယောက် ဘယ်ရောက်သွားသလဲ "
" ရှားလ် ကို ကျမ ချစ်တယ်..၊ ကျမကို ဂျတ် က ချစ်တယ်..။ ဂျတ် က ရှားလ် ကို
သတ်လိုက်တယ်..၊ ကျမ က ဂျတ်ကို သတ်လိုက်တယ်.... "
ဂျူးတွေ ၏ ကျွန်းကို စစ်ဆေးသည် ။ ဂျူး ယောင်္ကျား နှစ်ယောက် ဂျူး မိန်းမ နှစ်ယောက်ကို
တွေ့ သည် ။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဝင် က မေးသည် ။
" မိန်းမ နောက်တစ်ယောက် ဘယ်က ပေါ်လာတာလဲ "
" ကျနော်တို့အကြံအဖန် လုပ်ထားတာပါ "
ရုရှားတို့ကျွန်းပေါ်သို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဝင်များ တက်လာကြသည် ။ ယောင်္ကျားနှစ်ယောက်
မှာ ချက်အရက် သောက်နေကြသည် ။ တစ်ယောက်တည်းသော မိန်းမမှာ အလုပ် လုပ်နေရှာသည်။
" လိင်ဆက်ဆံရေး ပြဿနာကို ခင်ဗျားတို့ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြသလဲ "
" သီတင်းတစ်ပတ်မှာ စုံဂဏန်းကျတဲ့နေ့ ဆိုရင် နာတာရှာ က ကျနော့် မိန်းမ.. အဲ..အီဗန်က
သူ့ ရဲ့ လင်ငယ်...၊ မဂဏန်းကျတဲ့နေ့ ဆိုရင် နာတာရှာ က အီဗန်ရဲ့မိန်းမ..၊ ကျနော် က
လင်ငယ်.။ စနေ.၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ တွေမှာတော့ ဒီကောင်မကို ကျနော်တို့ဝိုင်းရိုက်တယ်. "
" လင်ငယ်နေလို့"
« Reply #562 on: September 02, 2011, 12:37:36 PM »
" သ တိ ပေး ခံ ရ ပြီ "
ပြင်သစ် အမျိုးသမီး ၊ အင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီး နှင့် အမေရိကန် အမျိုးသမီး တို့ကိုယ့်ယောင်္ကျား
အကြောင်း ပြောနေကြသည် ။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးက စပြောသည် ။
" နှစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ တစ်နှစ်မှာ ၃၆၅ ကြိမ်.၊ ၃၆၆ ကြိမ် ယောင်္ကျားကို သစ္စာဖောက်တယ် "
အင်္ဂလိပ်မ က ပြောသည် ။
" ကျမတို့ ဆီမှာတော့ အဲ့ဒီလို မရဘူး..၊ တစ်နှစ်မှာ အကြိမ် ၁၀၀ လောက်ပဲ သစ္စာဖောက်နိုင်တယ် "
အမေရိကန်မ က တိုးတိုးလေး ပြောသည် ။
" ကျမကတော့ ကျမယောင်္ကျားကို တစ်ခါမှ သစ္စာ မဖောက်ဖူးဘူး "
ပြင်သစ်မ နှင့် အင်္ဂလိပ်မ အံ့သြသံဖြင့် ပြိုင်တူ မေးလိုက်ကြသည် ။
" ဘာပြောတယ်... "
" ကျမ ရှင်းပြပါ့မယ်..၊ ကျမတို့လက်ထပ်ပြီးပြီးချင်း ကျမကို ယောင်္ကျားက မြင်းရထားနဲ့သူ နေတဲ့
ခြံကြီးကို ခေါ်သွားတယ် ၊ လမ်းမှာ ခြေထောက်ခေါက်ပြီး မြင်းလဲကျသွားတယ်..။ အဲ့ဒီတော့ တစ်
လို့ယောင်္ကျားက ပြောတယ်...။ အဲ့ဒီနောက် ဆက်သွားတယ်..။ ချောင်းလေးတစ်ခုကို အဖြတ်မှာ
မြင်းဟာ ခြေခေါက်ပြီး လဲသွားပြန်တယ်..။ အဲ့ဒီတော့ ယောင်္ကျားက နှစ် လို့ပြောတယ် ..။ အဲ့ဒီ
နောက် ခရီးဆက်တယ်..။ ခြံထဲအ၀င်မှာ ပင်ပန်းရှာတဲ့ မြင်းခမျာ နောက်တစ်ကြိမ် လဲကျပြန်ပါရော.
အဲ့ဒီ့အခါမှာ ယောင်္ကျားက သုံး လို့ပြောပြီး ပါလာတဲ့ ၀င်ချက်စတာ သေနတ်နဲ့မြင်းကို ပစ်သတ်
လိုက်တယ်...။ ကျမ မနေနိုင်တာနဲ့ရှင် ဘာဖြစ်လို့မြင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ရတာလဲ လို့ 
မေးလိုက်မိတယ်..။ အဲ့ဒီတော့ ယောင်္ကျားက ဘာပြောသလဲ သိလား.. "
ပြင်သစ်မ နှင့် အင်္ဂလိပ်မ သိလိုစိတ် ပြင်းပြစွာဖြင့် ပြိုင်တူ မေးလိုက်ကြသည် ။
" ဘာပြောသလဲဟင် "
" တစ် တဲ့ရှင် "
« Reply #563 on: September 02, 2011, 01:00:11 PM »
" ကျန်း မာ ရေး အ တွက် "
သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦး ကွယ်လွန်သည် ။ ၄င်း ၏ အလောင်းကို မြေချပြီးသောအခါ
ဆွေမျိုးများအားလုံး ၄င်း၏အိမ်တွင် စုဝေးကြသည် ။ ကွယ်လွန်သူ၏ ၀တ်လုံတော်ရက သေ
တမ်းစာကို ဖတ်ကြားသည် ။
" ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာများ အားလုံးကို ကျွန်ုပ်၏ ဇနီးသည်အား ပေးအပ်လိုက်သည် ။
ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရှိ တိုက်အိမ်ကြီးကို သမီးအတွက် ထားခဲ့သည် ။ သုံးခန်းတွဲတိုက်
ခန်းကို အိမ်ဖော်မလေး အမည်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးရမည် ။ ငွေသည် အရေးမကြီး
ကျန်းမာရေးသာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ဟု တစ်ချိန်လုံး ကျွန်ုပ်အား ပြောခဲ့သူ
ကျွန်ုပ်၏ တူတော်မောင်အတွက် အက်ဒီးဒတ်စ် အားကစား ဖိနပ် အသစ်ကျပ်ကျွတ်
တစ်ရံ ထားခဲ့သည် ။ "
« Reply #564 on: September 03, 2011, 12:46:24 PM »
" က လဲ့ စား "
အလွန်ပိန်လှီသော ဂျူးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာသည် ။ အရက်မူးနေသော
ရုရှားကြီးတစ်ယောက် ၄င်းအနား ကပ်လာပြီး ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ဂျူး၏ မျက်ခွက်
ကို ပိတ်ထိုးလိုက်သည် ။ ဖင်ထိုင်ရက် လဲကျသွားသည့် ဂျူးက မေးစေ့ကို ပွတ်ရင်း မျက်နှာ
ငယ်နှင့် ပြန်မေးသည် ။
" ကျနော့်ကို ဘာဖြစ်လို့ထိုးတာလဲ "
" ငါတို့ ရဲ့ယေရှုသခင်ကို မင်းတို့ဂျူးတွေ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ တံစို့ ရိုက်ပြီး
နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုးတာဟေ့ "
" ဟာ.....ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥစ္စာပဲဗျာ.. "
" ဘယ်လောက်ပဲ ကြာကြာ ကွာ...၊ ဒီအကြောင်းကို ငါ ဒီနေ့ မှ သိတာဟေ့ "
« Reply #565 on: September 03, 2011, 01:01:51 PM »
" တ ကယ့် လက် သည် "
အသက် ၈၀ အရွယ် အဘိုးကြီး တစ်ယောက် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်ကို
လက်ထပ်လိုက်သည် ။ ကိုးလအကြာတွင် အမျိုးသမီး မျက်နှာမြင်သည် ။ အဘိုးကြီးသည် ခရစ်ယာန်
ဘုန်းတော်ကြီးထံ ရောက်လာပြီး မွေးလာသည့် ကလေးသည် သူ့ ကလေး ဟုတ်၏လော.. သို့ မဟုတ်
ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ကလေးသည် လူပြည်သို့ရောက်လာခြင်းလော ဟု မေးရာ ဘုန်း
ကြီးက ဤသို့ပြန်ဖြေသည် ။
" ခင်ဗျားကို စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပြောပြမယ်..။ ဒါကို နားထောင်ပြီး အခု ခင်ဗျား
မေးတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်ဟာက ပိုဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်....။ အဲ.. အဖြစ်
တစ်နေ့ သဲကန္တာရထဲမှာ ကျုပ်ကို ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ခုန်အုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်..။ ကျုပ် ဘာလုပ်
ရမှန်း မသိဘူး..။ ခုခံဘို့အင်အားလဲ မရှိတော့ " ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော် အတိုင်းပါပဲ " လို့ 
စိတ်ထဲက တိုင်တည်တယ်..။ တစ်ဆက်တည်းမှာ လက်ထဲက တောင်ဝှေးကို မြှောက်ပြီး " ဒိုင်း "
ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ပစ်တဲ့ဟန် လုပ်လိုက်တယ်..။ လား....လား.. ခြင်္သေ့ကြီး ပက်လက်လန်ပြီး သေ
" ဒါ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ချက်ပဲ " အဘိုးကြီး ၀င်ထောက်သည် ။
" မပြောတတ်ဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ရဲ့ နောက်မှာ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်တော့ တကယ်
ရောက်နေလေရဲ့ ... "
« Reply #566 on: September 05, 2011, 02:12:17 PM »
" ပစ် မှတ် "
တက္ကဆပ်ပြည်နယ်ရှိ အော်ပရာ ဇာတ်ရုံတွင် ဖြစ်သည် ။
" ဖေဖေ..ဘာဖြစ်လို့မင်းသားက သီချင်းဆိုတဲ့အခါ
" လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပစ်မှတ်ကို တည့်တည့်ထိအောင် ပစ်
ရတာ အင်မတန် ခက်တယ်လေ... "
" ပေး လိုက် ပေ့ါ ကွာ "
" ဂျွန် က ငါ့ဆီက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ချေးနေတယ်ကွ..မင်း
ဘယ်လို ထင်သလဲ.. ပေးသင့်သလား... "
" ဟ .ပေးလိုက်ပေါ့ကွ.. "
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ. "
" ရှင်းရှင်းလေးပဲ..မင်း မပေးလိုက်ရင် ဒီကောင် ငါ့ဆီက
ချေးမှာ မို့ လို့ ပေါ့ကွ. "
« Reply #567 on: September 05, 2011, 02:26:40 PM »
" လမ်း လျှောက် တဲ့ နွား "
မြို့ ငယ်တစ်မြို့ ၏ လူသွားလမ်းပေါ်တွင် မိန်းမကြီးတစ်ဦး နွားကို ဆွဲလာသည်။
ရဲသားက မိန်းမကြီးအနား ကပ်လာကာ ဤသိ်ု့ ပြောသည် ။
" အဒေါ်ကြီး..ဒီလမ်းဟာ လမ်းလျှောက်သူတွေ အတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်
ထားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိတယ် မဟုတ်လား.. "
" သိသားပဲ. ဘာလဲ ငါ့နွားက ဘိုင်စကယ် စီးလာတယ်လို့မင်းပြောချင်လို့ လား "
" သူ လိမ် တယ်. "
တရားသူကြီး - " ဒီပစ္စည်းကို မောင်မင်း ခိုးခဲ့တယ် မဟုတ်လား "
တရားခံ - " မခိုးပါဘူး "
တရားသူကြီး - " ဒါပေမဲ့.. ဒီသက်သေက မောင်မင်း ခိုးတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ 
တွေ့ ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလား "
တရားခံ - " သူ လိမ်တာပါ... ကျနော် ယူတုန်းက အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး "
« Reply #568 on: September 05, 2011, 02:49:27 PM »
" အ ချိန် ကို လေး စား ပါ "
ပါမောက္ခကြီး ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ပို့ ချနေသည် ။ ဆက်တိုက်ပို့ ချနေရာ
တစ်နာရီ ၊ နှစ်နာရီ ၊ သုံးနာရီ ကြာသွားသည် ။ သတိရပြီး ကျောင်းသား
များကို အားနာသံဖြင့် ပြောသည် ။
" အသေးစိတ်တွေကို ရှင်းပြနေလို့အတော်တောင် ကြာသွားတယ်
ဆောရီးပဲ.. ဆရာ့ဆီမှာ နာရီ မပါဘူးကွဲ့ ..ဒါကြောင့်ပါ "
အခန်းထဲမှ ကျောင်းသားတစ်ယောက် က ပြောသည် ။
" ဆရာကြီးနောက်မှာ ပြက္ခဒိန် ချိတ်ထားပါတယ် ခင်ဗျ "
« Reply #569 on: September 06, 2011, 12:27:18 PM »
" မ ဖြစ် စေ ရ ဘူး "
လူနာက ဆရာဝန်ကို မေးသည် ။
" ဒေါက်တာ...ကျနော် နေပြန်ကောင်းမယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲနော်.. ဒီလိုမေးတာ ဘယ်လိုမှ
စိတ်မရှိပါနဲ့ ..။ ဆရာဝန်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ရောဂါဖြစ်တာနဲ့ကုတာ တစ်ခြားစီ ဖြစ်
တတ်ကြောင်း......ဥပမာ အဆုတ်အအေးမိတယ်လို့ထင်ပြီး ကုပေမဲ့ သေတဲ့ အခါကျ
ကင်ဆာရောဂါနဲ့သေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြောင်း သူများ ပြောဖူးတာ အမှတ်ရလို့ ပါ "
" ဒါမျိုးတော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာ မဖြစ်စေရဘူး...စိတ်ချ..။ အဆုတ်အအေးမိတဲ့ ရောဂါကို
ကုရင် အဆုတ်အအေးမိတဲ့ ရောဂါနဲ့ ပဲ သေစေရမယ်ဗျာ.. "